सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य कती ? | Makalukhabar.com
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य कती ?
असोज १७, काठमाडौँ । आज साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
बिहिबार प्रतितोला ७० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छापावाल सुन आज पनि सोही मूल्यमा बिक्री बितरण भईरहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार बिहिबार प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैयाँमा बिक्रीबितरण भएको तेजावी सुनको मूल्यमा पनि आज सोही मूल्य कायम भएको छ ।
शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि स्थिर भएको महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । बिहिबार चाँदी सोही मूल्य कायम रहेको थियो ।
त्रिविको उपकुलपतिमा कोइराला, बास्कोटा र पौडेलमध्ये को नियुक्त हुने ?